Maydka Maxamad Qanyare Afrax oo maanta lagu aasay Dayniile | Xaysimo
Home War Maydka Maxamad Qanyare Afrax oo maanta lagu aasay Dayniile
Maydka Maxamad Qanyare Afrax oo maanta lagu aasay Dayniile
Boqollaal dadweyne ah ayaa ka qaybgallay aaska maydka marxuum Maxamad Qanyare Afrax oo shalay ku geeriyooday Isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho.
Maydka Marxuumka ayaa lagu aasay xabaalo ku yaala degmada Dayniile, waxana joogay wasiiro ka tirsan Dawladda Federaalka, Xildhibaano, Saraakiil Ciidan iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Aroornimadii hore waxa maydka Maxamad Qanyare salaadda janaasada lagula tukaday masaajidka madaxtooyada iyadoo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdillahi Farmaajo iyo saraakiil sare oo ka tirsan dawladdiisa.
Dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa goor sii horraysay waxa uu salaadda janaasada ku tukaday marxuumka.
Madaxweynaha ayaa Alle uga baryey in uu u naxariisto, hoygiisana ka yeelo jannada.
Maxamed Qanyare wuxu ku dhashay degmada Ceel-Buur bishii Ogost 1941-kii, halkaas ayuu ku koray kana galay malcaamad Quraanka, ka dibna waxa uu tagay magaalada Xamar oo uu waxbarashada ilaa dugsiga dhexe uu ku dhamaystay.
Tacliintii dugsiga dhexe markii uu dhamaystay waxa la qoray booliska, waxaanu ahaa askari ka tirsan booliska, muddo ka dibna wuu ka tagay.
Marxuumku wuxu markii dambe u wareegay dalalka Bariga Afrika oo uu ganacsi ka bilaabay sannadii 74-kii. Waxaanu mar labaad halkaa dib uga bilaabay wax barashadiisii oo uu ku bartay cilmiga maamulka iyo maraaraynta, sida uu sheegay kaaliyihiisii gaarka ahaa.
Cabdillaahi Sheekh Daahir oo muddo 20 sannadood iyo dheeraad ah kaaliye u ahaa marxuumka oo ka waramayey taariikhdiisii siyaasadeed ayaa yidhi “markii wadanku qalalaasaha galayna waxa uu wax ka aasaasay ururkii SNM, aasaseyaasheedii ayuu ka mid ahaa. Wuxu u wareegay hadana markii dambe oo la is qabtay, wuxu ka mid ahaa aasaaseyaashii ururka USC.”
Maxamed Qanyare Afrax waxa uu ka mid noqday xukuumaddii Cabdiqaasin Salaad Xasan oo uu noqday wasiirka kalluumaysiga.
Hase yeeshee markii dambe waxa uu ka mid noqday hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho u kala qaybsanayd. Waxaana saldhig u noqtay xaafadda Dayniile.
Sannadkii 2006-dii waxa uu Maxamed Qanyare Afrax ka mid noqday isbahaysigii la dagaallanka argagixisada ee ay samaysteen raggii hogaamiye kooxeedyada ahaa.
Waxa uu ka mid noqday xukuumaddii Cabdillaahi Yuusuf Axmed oo uu ka qabtay xilka wasiirka amniga, markii xarunteeda ku meel gaadhka ahi ahayd magaalada Baydhaba.
Xamar ayuu dib ugu noqday waxaanu ka mid ahaa raggii loo diiday in ay ka mid noqdaan xildhibaannadii baarlamanka la soo xulay ee doortay xukuumaddii talada qabatay ee uu madaxweynaha ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud, hase yeeshii markii dambe waxa u suurto gashay in uu noqdo xildhibaan ka tirsan golaha baarlamanka.
Waxa ku soo booday xanuun uu dareemay in aanu hawshii xildhibaannimo wadi karin, waxaanu kursigiisii u banneeyey wiilkiisa Cabdiweli Maxamed Qanyare oo ilaa haatan ah xubin ka tirsan baarlamanka Soomaaliya.